Masjidka Al-Rowda ee Boosaaso oo lagu qabtay Olole loogu gurmanayo Shacabkii lagu laayey Is goyska Zoobe ee Muqdisho. | puntlandi.com
Masjidka Al-Rowda ee Boosaaso oo lagu qabtay Olole loogu gurmanayo Shacabkii lagu laayey Is goyska Zoobe ee Muqdisho.
Boosaaso:-Culimo’ udiinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalaa Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa habeenkii 2aad ku qabtay masjidka Rowda ee magaalada Boosaaso kulan loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay is-goyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Culimo’ udiinka Soomaaliyeed ayaa caawa mar kale ku booriyey shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan guud ahaan gaar ahaan reer Boosaaso in ay gurmadkooda meesha ka sii wadaan si caawinaad deg deg ah loola gaaro shacabkii Soomaaliyeed ee lagu xasuuqay is goyska Zoobe.
Olalaha gurmada ee ka socday Masjidka rowda ee Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha Gobolka Bari iyo degmada ,Issimo , Nabadoono, ganacsato iyo weliba Wasiirka Arrimaha Guddaha Puntland Cabdulaahi Timacade Iyo Wasiiru Dowlaha Wasaarada Maaliyada Puntland Maxamuud Beeldaaje iyo masuuliyin kale duwan.
Culimo’ udiinka Soomaaliyeed ayaa mar kale ku celisay in ay muhiim tahay in bulshada Soomaaliyeed ay midoobaan gacantana is qabsadaan si ay uga guulaystaan cadawgooda gudaha iyo kan dibada. Kulankii caawa ka dhacay masjidka rowda ee loogu gurmanay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho ayaa culimadu waxay caawa oo ahayd habeenkii 2aad ee ololaha ku ururiyeen lacag fara badan oo aan weli xisaabteeda aan helin balse aan dib idinkaga soo gudbin doono insha Allaahu.